မင်္ဂလာဆောင်နှင့်ပုံတူဓာတ်ပုံဆရာ - အရောင်းနှင့်အကောင့်စီမံခန့်ခွဲမှု | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် » မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းနှင့်ပုံတူဓာတ်ပုံသတင်းထောက်တစ်ဦး - အရောင်းနှင့်အကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု
ယောဘသည်ဖွင့်ပွဲ: မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းနှင့်ပုံတူဓာတ်ပုံသတင်းထောက်တစ်ဦး - အရောင်းနှင့်အကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု
ရာထူး: မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းနှင့်ပုံတူဓာတ်ပုံသတင်းထောက်တစ်ဦး - အရောင်းနှင့်အကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု
သင်လက်ရှိမင်္ဂလာဆောင်ခြင်းနှင့်ပုံတူရိုက်ကူးနေကြပါတယ်ပေမယ့်သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာပိုကောင်းရရှိရန်ပေးဆောင်ရ LOVE မလဲ
သငျသညျတခုထူထောင်ဓာတ်ပုံဆရာ Are သင်မူကား, LOVE တစ်ခုခုလုပ်နေတာတစ်ပတ်ကာလအတွင်းသင့်ဝင်ငွေမှထည့်သွင်းဖို့ရှာဖွေနေပါသလား
အားလုံးတိုင်းပြည်အတွက်ပင်ကမ္ဘာတစ်လွှားကနေအခြားအအလုပ်လုပ်နေသောမင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံဆရာနှင့်အတူစကားပြောရတဲ့မြင်ယောင်ကြည့်ပါ ... ပြီးတော့ထိုသို့ပြုမှပေးဆောင်တဲ့ !!
သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောမင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုအားလုံးလေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ် - အကြီးမားဆုံးထံမှရုံထွက်စတင်သူတို့အား။
သငျသညျသူတို့အားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ပို. ပင်အောင်မြင်သောဖြစ်လာကူညီမယ်!
ShootDotEdit မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံဆရာများ၏အောင်မြင်မှုအားပေးထံအပ်နှံ, ကြှနျုပျတို့သည်အခြားဓာတ်ပုံဆရာနှင့်အတူစကားပြောကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အပေါ်ဓာတ်ပုံဆရာလိုအပ်နေပါသည်။
သငျသညျဓာတျပုံ, မင်္ဂလာဆောင်နှင့်အခြားဓာတ်ပုံဆရာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်အကြောင်းပြောနေတာ LOVE
ဤသူသည်သင်တို့ဖြစ်ပါတယ် (နှင့် အကယ်. သင်ဤဝေးကိုဖတ်ပြီးပြီဆိုပါက, ထို့နောက်ငါကခန့်မှန်းတယ်!) အကယ်. သင်တလျှောက်, ကောင်းတစ်ဦးမထိုက်မတန်ဖြစ်ချင်ပါတယ်ထင်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်လျှင်, ကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ့်ကိုကိုယ်အကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောပြမယ့်အမြန်အဖုံးစာတစ်စောင်ကျော်ပေးပို့ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့်အတူ။ ငါတို့သည်သင်တို့ထံမှစကားကိုနားထောငျဖို့ LOVE ချင်ပါတယ်!
NO အအေးခေါ်ဆိုမှု - ကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ဆောင်မှုအတွက်အကျိုးစီးပွားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြကြောင်းမင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံဆရာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပါ!
အသစ်နှင့်အလားအလာဖောက်သည်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေး Build, သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူ (သင်ဖုန်းများပေါ်မှာအများကြီး chatting ပါလိမ့်မယ်)
(ကြှနျုပျတို့သညျဤပေါ်တွင်သင်လေ့ကျင့်ပါလိမ့်မယ်) အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်ပေါ်မှာမင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံဆရာအကြံပေး, နှင့်ဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် thru သူတို့ကိုပဲ့ပြင်
အဖွဲ့နှင့်အဖွဲ့သည် enviroments မှာပူးပေါင်း
Salesforce တစ်ပေါင်းနှင့်အတူအရောင်းအတွေ့အကြုံနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်း !!
ကျွမ်းကျင်မှုဖြေရှင်းရေးမှာ Common Sense, စဉ်းစားဟန်ဆင်ခြင်ခြင်းနှင့်ပြဿနာ
ကျနော်တို့ကမ္ဘာကြီးကျယ်ပြန့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံဆရာများအတွက် High-end / အဖြူရောင်လက်အိတ် Post-ထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုကိုပေး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမာခံတန်ဖိုးကိုအလွန်ကြီးစွာသောအတွေ့အကြုံနှင့်အတူလူတန်းစားန်ဆောင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးကယ်နှုတ်သောကွောငျ့ကျနော်တို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံဆရာများအတွက်ပထမဦးဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြသည်။ ငါတို့သည်ဤလောကအတွက်အကောင်းဆုံးနဲ့အရည်အချင်းအရှိဆုံးမင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံဆရာအချို့ဝတ်ပြုကြလော့။
တစ်ဦး "google ဟန်ရှိသော" ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အလုပ်။
ယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်များ & ပျော်ရွှင်နာရီ
အခမဲ့အမည်ပြောင်တာဝန်ကျတဲ့နေရာ - yeah, ဒီတစျခုရရှိခဲ့ခံရဖို့ရှိပါတယ်
လျော်ကြေး: $ 12 တစ်နာရီပေါင်းကော်မရှင်
နာရီ: အပြည့်အဝအချိန် - တစ်ပတ်ကို 40 နာရီ
ShootDotEdit တစ်ခုတူညီသောအခွင့်အရေး Equal Opportunity အလုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးပုဂ္ဂိုလ်များ, လူမျိုး, အသားအရောင်, ဘာသာရေး, လိင်, ကိုယ်ဝန်, မူရင်းနိုင်ငံသား, မျိုးရိုး, နိုင်ငံသား, အသက်, တရားဝင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းမသန်စွမ်း protected, ဖုံးလွှမ်းဝါရင့်အခြေအနေ, အမေရိကန်ယူနီဖောင်းဝတ်န်ဆောင်မှုအတွက်အခြေအနေ, လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့ပတ်သက်ခြင်းမရှိဘဲအလုပ်အကိုင်အများအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခံရကြလတံ့ အခြားမည်သည့်တရားဝင်ကာကွယ်ပေးကဏ္ဍအိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ, မျိုးရိုးဗီဇသတင်းအချက်အလက်များသို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်။
ကျနော်တို့အနေနဲ့အားလုံးပါဝင်နိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီးန်ထမ်းလုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့်မတူကွဲပြားမှုကိုလက်ခံနိုင်ဖို့ကြိုးစားကြသည်။ ကျနော်တို့တုံ့ပြန်ရန်လူတိုင်းကိုအားပေးပါ။ ကျနော်တို့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုဆက်သွယ်အတွက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်ကျနော်တို့ ShootDotEdit ၌သင်တို့၏အကျိုးစီးပွားများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုတန်ဖိုးထားတယ်။
ယခင်: မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံ Editor ကို
နောက်တစ်ခု: ဘရော့ဒ်ဝေးဗီဒီယိုရဲ့ဆူး Pelino Fame induction အခမ်းအနား၏ 2017 ရော့ခ်ပြီးတော့ Roll Hall ကအဘို့အ Primetime သူဟာ Emmy Award ဆု Nomination လက်ခံတွေ့ဆုံ